﻿ काखी गन्हाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ उपाय
काखी गन्हाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ उपाय
गर्मी मौसममा अत्यधिक पसिना आउने समस्यासँगै काखी गन्हाउने गर्छ। यो समस्याका कारण कतिपयलाई सार्वजनिक स्थल वा कार्यलयमा बस्दा समेत ठूलो समस्या पर्ने गरेको छ ।
काखी गन्हाउँछ भन्दैमा नआत्तिनुहोस्। किनकी यसका समाधान पनि छन् ।
काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय यस प्रकार छन्ः
हावा छिर्ने (प्राय कटन र फाईबर)का लुगा लगाउने
हावा छिर्ने लुगा लगाउनुपर्छ। अन्य लुगाले पसिना नसोस्ने तथा छालामा पनि अशर गर्ने भएकोले गर्मी मौसममा सिन्थेटिक्सयुक्त कपडा लगाउनुपर्छ।
छालाको पीएच घटाउः
एसिड भएको समयमा छालाको ब्याक्टेरिया बाँच्न सक्दैन। तसर्थ स्याउको वाइन, भिनेगार, चियाको तेल र विच हेजल लगाउँदा पनि शरिरको दुर्गन्ध हट्छ। स्याउको वाइन, भिनेगर र विच हेजललाई पाखुरामुनि दल्ने गर्नुपर्छ।
कागतीको रस दल्नु सबैभन्दा उपयुक्त घरेलु तरिका हो। यसबाट कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। आधा टुक्रा काटेको कागती काखीमा निचोरेर दल्ने र यसलाई केही समय सुक्न दिएर लुगा लगाउनुपर्छ। यसको केहीबेर पछि चिसो पानीले नुहाउनुपर्छ। यसले शरिरबाट आउने पसिनायुक्त गन्धबाट मुक्त गर्नुका साथै लामो समयसम्म ताजा राख्छ।
मौसमी फलफुल र पर्याप्त पानीः
तुलसी र निम पातः
सरसफाई र स्वास्थ्यमा ध्यानः